Dezie ihe ị ga-eme site na Onye Ọrụ Nlegharị Award Winning na Odisha | Kpọọ + 91-993.702.7574
Lee!... na Ekele si n'ala Onyenwe anyị Jagannath.Bhubaneswar - obodo nke ụlọ nsọ; isi obodo nke Odisha bụ m motherland. Odisha, nke e ji mara omenala, ihe owuwu na ihe ndị dị oké ọnụ ahịa na-abụ mmụọ nke India. Ụlọ nsọ ndị dị ebube, akara ngosi akara ngosi, ndị na-adọrọ adọrọ, ndị na-adventurous ebe obibi anụ ọhịa na ogige ntụrụndụ mba, anụ ọhịa ndị na-apụ apụ na chi Chilika na-adọta ọtụtụ ndị nleta. Achọrọ m ikpughe mma a na ụwa dum, anyị bụkwa otu n'ime ndị na-ahụ maka Onyinye Award Winner na Odisha na ọrụ gị.
E gosipụtara m ọtụtụ ihe site na nwata m na nsogbu ndị nwere nsogbu. Nke a kpaliri m ịzụlite ụlọ ọrụ a ma nyochaa mmezu zuru oke nke nwere ike ịgba onye ezumike ma ọ bụ nzukọ nke ndị ọbịa ume n'ezie. Anyị nwere ike iji ọnụ kwuo na, n'ime afọ ole na ole, anyị nwere ọtụtụ mgbalị na hardwork anyị bụzi Award Winning Tour Operator na Odisha. Nke ahụ bụ ụzọ m si "Nwa Nwanyị" Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd bịara na-enyo enyo. Site na ahụmahụ m na itinye aka na ụlọ ọrụ a, enwere m ike ịkwakọta otu ìgwè dị njikere nke ukwuu. ndị ọrụ nwere ahụmahụ bụ ndị ga-agafe ọrụ ha karịa iji nye ndị ọbịa anyị ahụmahụ kachasị mma njem.
Taa, anyị agbasawo nku anyị na New Delhi na Kolkata ma na-arụ ọrụ dị iche iche nke India site n'enyemaka nke Ngalaba Ntụrụndụ, Gọọmenti Odisha na Gọọmenti India. N'ịbụ onye na-enye ndị na-eme njem nlegharị anya na Odisha, isi okwu anyị bụ inye ndị njem njem ndụ ha niile, igbe jupụtara na ncheta na ihu ọchị.
Na nke a, m ga-achọ ịnakpo onye ọ bụla ka ọ bịa leta mba anyị magburu onwe ya nke magburu onwe ya na izute ezughị oke ya. Ọ bụ ezi olileanya m na ndị ọbịa ga-anwa ịnwa ịchọta ịchọta ihe ndị dị na India. Ọ ga-amasị m iji obi sie gị ike na ahụmahụ ya ga-anọgide na-echetara ha oge oge.
M niile kacha mma gị niile na-atụ anya nabata gị Odisha.
MD, Sand Pebbles Njegharị